Mianatra mampiofana ny Schnauzer goavanao | Tontolo alika
Raha manana Giant schnauzer ao an-trano, azo antoka fa efa tsapanao fa io biby io dia manana toetra ara-batana miavaka hiaraha-miasa, satria manana fanoherana, hery ary fandanjana lehibe izy. Izany no antony mahatonga ny ankamaroan'ny tranga alika ity hampiasana ny asa sy ny fanaovana asa. Na izany aza, alohan'ny hanombohanao ny biby kelinao hanao hetsika ara-batana dia zava-dehibe ny hampiofananao azy amin'ny fomba mety.
Para fiaran-dalamby Ny biby rehetra, voalohany indrindra dia tsy maintsy fantatsika sy fantatsika izany, ohatra ny alika Schnauzer, satria tanora dia tanora izy ireo dia tsy maintsy mijanona ela araka izay azo atao amin'ny tompony, mba hamoronana fatorana mifamatotra mafy izay mamela azy ireo ho akaiky. Toy izany koa, rehefa te hanomboka hampiofana azy ianao dia tokony ho fantatrao tsara hoe iza no homena azy, satria raha tsy eo am-pelatanan'ny manam-pahaizana izany dia mety hampidi-doza ary mety hanana toetra masiaka mihitsy aza.
Ny tadiavinay dia mahay mandanjalanja ny biby hahatratrarana vokatra tsara, noho izany dia tsy maintsy manomboka mampiofana an'io biby io isika na mihoatra ny 7 na 8 volana. Amin'ny voalohany, ny fiofanana dia tokony hatao amin'ny lalao na hetsika izay misy kilalao toy ny baolina, tapa-damba, sns. Toy izany koa, ho zava-dehibe ny faharetana satria toy ny fampiofanana rehetra dia tsy mora izany.
Manoro hevitra anao aho mba hanao drafitra an-tsoratra momba ny tsirairay amin'ireo dingana voalohany, hanombohana ny fiarovana, satria tena ilaina sy marefo ireo, satria ny karazana lesoka rehetra atao dia mety hiafara amin'ny fahasarotana sy valiny lehibe ary tsy ilaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Mianatra mampiofana ny Giant Schnauzer anao
Vao tsy ela akory izay no nahitanay Giant Schnauzer teny an-dalana ary nakarinay izany sahabo ho herintaona eo ho eo. Manana fahalemena izy amin'ny fandehanana any amin'ny Arroyo sy filomanosana ary indrindra amin'ny fakana sakafo eo ambony latabatra. Torohevitra vitsivitsy hampiofanana azy azafady?
Sorohy ny fofona amin'ny hafanana
Manasitrana ratra orona alika